Sarimihetsika Milaza Fa Tokony Hiaraka Hiasa Ireo Mpianatra Avy Ao Afovoany Sy Atsinanan’i Eoropa Hiadiana Amin’ny Kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2016 17:38 GMT
Dona Kosturanova manazava ny tombontsoa azo amin'ny fametrahana tambajotran'ireo fikambanan'ny mpianatra. Sary: Pikantsary avy amin'ilay fanadihadiana “Fametrahana Tambajotran'ny Tanora Manohitra Kolikoly.”
Asehon'ny fanadihadiana iray vao navoaka tsy ela akory izay, amin'ny fiteny Anglisy sy Makedoniana, ny fomba ahafahan'ireo fikambanana tanora samihafa avy amin'ny firenena isan-karazany miaraka miasa hiezahana mampiato ireo aloka iainana izay mazàna no mitranga eny anatin'ny toerana fampianarana.
Araka ny “Fametrahana Tambajotran'ny Tanora Manohitra Kolikoly,” ny fifanakalozana traikefa momba ireo olana atrehan-dry zareo no dingana voalohany, miainga avy any amin'ireo olana mihanaka be toy ny fanaovana hosoka amin'ireo fanamby mampiavaka ny firenena, tahàka ireo fepetra tsy zaka iainana any amin'ireo efitrano fatorian'ireo Makedoniana mpianatra.
Resahan'ilay fanadihadiana ihany koa ny fampidirana ny fitsipi-pitondrantena ao Makedonia, Armenia ary Azerbaijana, amin'ny alàlan'ny Transparent Education Network (TEN) ho toy ny fitaovana hiatrehana ny kolikoly sy hampiroboroboana ny mangarahara. Ny fampidirana ny mpianatra ho anatin'ny famoronana ny fitsipi-pitondrantena tahàka izany dia nanaporofo ny fandraisany anjara amin'ny fametrahana azy, satria ireo izay heverina fa hampihatra azy dia hanana toepo mahatsiaro ho tompony ary fahatongavantsaina momba ny zony.
Natao tany Georgia tsy ela akory izay ny fanasongadinana ny lanjan'ny fandraisana anjaran'ny mpianatra amin'ny fandraisana fanapahankevitra mba hitazonana ireo toeram-pampianarana ho mendrika, izay nipoahan'ny fihetsiketsehana goavana nataon'ny mpianatra nanoherana ny kolikoly ny 10 Martsa teo. Vokatra naterak'ilay fanehoankery ny fisintonan'ny mpitarika (sady tokana) mpirotsaka ho ‘chancellier’-n'ny governemantan'ny mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolom-panjakana ao Tbilisi, andro efatra taty aoriana. Ilay mpirotsaka, Giorgi Gaprindashvili, dia mpikambana iray avy ao amin'ny governemantan'ny mpianatra, rehefa hita fa nanodinkodina vola.
Ny fanadihadiana voalohany ao anatin'ireo andiany atolotry ny “Fametrahana Tambajotran'ny Tanora Manohitra Kolikoly” dia niresaka ny “Famaritana sy Fahafantarana ny Kolikoly,” raha ireo andiany manaraka kosa hiresaka ny “Angondrakitra sy Fikarohana momba ny Kolikoly,” “Fikatrohana Ety anaty sy Ivelan'ny Aterineto Hiadiana amin'ny Kolikoly,” ary “Ny Fifandraisan'ny Andrim-panjakana.”